Metal lathe igwe maka ire, CNC, Manual, China Manufacturer & Supplier
Ị nọ ebe a: Ulo1 / Metal lathe igwe n'ihi na ire
Mme mbụme?Give us a call at +8615318444939, ma gwa otu onye ọkachamara ọkachamara anyị okwu.I nwekwara ike dejupụta akwụkwọ ịkpọtụrụ anyị.
A na-ejikwa usoro CNC na-achịkwa usoro ntụgharị ahụ, nri na-akpaghị aka, nke kwesịrị ekwesị maka nhazi nhazi
Vetikal lathe igwe
Na workpiece rotates horizontally na cutter na-akpali elu na ala. O kwesịrị ekwesị ka workpiece na nnukwu ibu na dayameta
Oké ọrụ lathe igwe
Lathe spindle site na oghere dịtụ nnukwu, nhazi oge nwere ike ịbụ karịa mita 10, nwere ike iguzogide ịdị arọ nke ngwa ọrụ ahụ ruo ọtụtụ tọn
Pipe threading lathe igwe
Adabara threading ogologo na nnukwu dayameta ọkpọkọ, The spindle oghere bụkwa dịtụ nnukwu
Manual akara nke ndepụta na ukpụhọde, adabara na-abụghị ogbe nhazi
Oghere ala ụra
Wụnye ihe a na-ewepu iwepu n'ọnọdụ nke ihe ndina lathe, Mee ka dayameta ntụgharị nke ụdị diski lathe dịkwuo
Slant ọjọọ lathe igwe
Bed bed nwere ụfọdụ tilt n'akuku, adaba mgbawa orùrù
Tinye isi ike na axis C na lathe maka igwe nri na mkpọpu ala, na-akpaghị aka
Obere igwe lathe
Adabara obere workpiece nhazi, ọnụ ala price, The arọ nke workpiece bụ ọtụtụ narị kilogram
Mgbe ọ na-abịa na nhọrọ nke lathe igwe, Ọ tumadi na-adabere n'ogologo, size, ibu ibu na nhazi mode nke workpiece. Kwụ lathe, vetikal lathe nwere ike họrọ. Ọ bụrụ na ọ bụ imepụta ihe, na-atụle CNC lathe, mana ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke nhazi ọrụ dị obere, mgbe ahụ CNC lathe dị ntakịrị, ị nwere ike ịhọrọ lathe akwụkwọ ntuziaka. Anyị lathe mma bụ anụ, si isi iyi nke ị nweta akara mma, zuru ezu nkọwa. Ajuju inabata.
Dịka ọnọdụ njikwa, enwere ike kee ya na CNC na ndị nkịtị
Dị ka n'akuku nke bedstead, nwere ike ikewa n'ihi na chọrọ bedstead udo bedstead
Dabere na sadulu, enwere ike kee ya n'ime lathe lathe na nkịtị lathe
Igwe lathe igwe bụ ụdị ihe eji egbu egbu igwe, nke a na-ejikarị, nwere ike gbanwee, oghere, na njedebe.
Mgbe machining ogologo ezughị, na workpiece nwere ike gabiga spindle center oghere mụbaa machining nso nke lathe. Nke a na-achọ dayameta nke spindle site na oghere ka ibu karịa dayameta nke workpiece.
Gini mere lathes ji di oke egwu? Akwụkwọ ntuziaka maka ọrụ lathe.
Lathes bụ ihe eji arụ ọrụ igwe, nke a na-ejikarị arụ ọrụ igwe. Ọ dịkwa oke egwu ma ọ bụrụ na ejighị lathe ahụ nke ọma.
Lathe bu ihe igwe nkpuru di nkpa, aru bu ihe igwe. Ọtụtụ mgbe, ịdị arọ nke ihe karịrị 1 tọn, ọ bụrụ na nnukwu lathe, ibu ahụ nwere ike iru ihe karịrị tọn iri. Mgbe lathe na-anọ ọdụ, ọ na-adị mfe imerụ ahụ ma ọ bụrụ na onye nọ nso na-ada ada na mberede metụ lathe ahụ.
Mgbe lathe ahụ malitere ịgba ọsọ, spindle ahụ na-agba ọsọ ọsọ na-eme ka ihe ọrụ ahụ gbanwee, ọ bụrụ na ihe mberede ahụ, mgbe ahụ mboanuo ahụ gbapụrụ, dị mfe ibute mmerụ ahụ dị oke njọ, na-erughị ihe mberede ụgbọ ala. Ma ọ bụ ogologo ntutu isi nke onye ahụ, aka uwe, ma ọ bụrụ na anaghị edozi ya nke ọma, dịkwa mfe itinye aka na igwe ahụ.
Ike ọkọnọ nke lathe na-ejikarị ọkụ eletrik arụ ọrụ, ọ bụrụ na enwere ọnya ọkụ eletrik, enwere ihe egwu nke ọkụ eletrik.
1 aghaghi ima otu esi aru oru lathe, oburu na onye ozo, aghagh inwe ahuhu n’ime oru nke ndi oru n’akuku ntuziaka, ma a gaghi ekwe ya ghazie lathe.
2 attentionaa ntị na iyi, ga-eme ka eriri ahụ sie ike, uwe anaghị ekwe ka eri ọ bụla, ma ọ bụ eriri akwa. Enweghị uwe aka, enweghị mgbaaka na elekere ọ bụla. Yiri ndị na-echebe anya mgbe niile.
1 ike ọkọnọ, ga-ahụrịrị na enweghị ọkụ eletrik, eriri ala dị mma
2 Akụkụ mmanụ ọ bụla ga-enwe mmanụ
3 Igwe lathe ga-akwụsị ịgba ọsọ mgbe ọ na-ebutu ihe arụ ọrụ ma ọ bụ na-enyocha izi ezi nke mpempe akwụkwọ ahụ
4 okuko lathe na agba oso, ndi oru gha anya ebe di anya site na lathe
5 Mgbe otutu lathes dị n’akụkụ, tọọ n’elu otu akụkụ
6 Ejila aka gị hichaa ihe e dere ede
7 Tupu ị na-arụ ọrụ lathe, gbaa mbọ hụ na akpọchiri mkpọchi ahụ, gbaa mbọ hụ na ejiri ihe arụ ọrụ ahụ
8 Tupu ibuputa na ibutu akwa lathe di nkpa, ekwesiri itinye nkpa n'etiti nkenke ahu na uzo uzo di iche iche ka ihe ahu ghara ida na mberede.
Kedu ihe dị iche na igwe lathe cnc yana igwe lathe ntuziaka?
Ihe dị iche n'etiti ha abụọ bụ n'ụzọ e si achịkwa ha.
Ọnọdụ njikwa nke CNC lathe: CNC system - njikwa - servo moto
Onye ọrụ ahụ ga-ebipụ mmemme ahụ site na iji mmemme G koodu, webata ya na usoro CNC nke lathe, lathe ahụ ga-achọpụta nhazi akpaka nke ihe eji arụ ọrụ, tupu emechaa, ọ nweghị ntuziaka aka ọzọ.
Modekpụrụ njikwa nke nkịtị lathe: chọrọ ọrụ aka, enweghị ike ịhazi njikwa, enweghi ike ịhazi ihe ọzọ.
Ikwesiri iyi uwe aka mgbe ị na-arụ ọrụ lathe?
Ọ dị oke egwu.
Ọ bụghị naanị na enweghị ike iyi uwe aka, buut ka ị na-eyi uwe ọrụ siri ike, akwa mkpuchi, ogologo ntutu iji kpuchie okpu mkpuchi, anaghị eyi uwe aka, ịcha ihe eji arụ ọrụ na ịmị ọnụ ga-eyi iko.
Ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ nkịtị lathe, e nwere ndị na-esonụ:
Enweghi lathe kpamkpam, ndị ọrụ dịkwa nso na arụ ọrụ,
Jiri aka aka tụgharịa wiilị aka.
3 jiri aka hapụ ma ọ bụ kpọchie mkpọchi
Igwe lathe na-adabere na ike dị elu iji kpoo spindle ka ọ gbanwee na nnukwu ọsọ ma jiri gloves rụọ ọrụ, ya mere ọ dị mfe ịnwekọ ma ọ bụ jikọta ya site na igwe.
Otu esi ahọrọ ngwa oru kwesiri maka lathe
E kwesịrị ichebara ihe ndị na-esonụ echiche mgbe ị na-ahọrọ ụdị ngwa ọrụ:
(1) Na-arụ ọrụ dị iche iche dịka o kwere mee n'otu oge;
(2) Na ọnwụ usoro, ngwá ọrụ na-enweghị ike igbochi workpiece ngwe;
(3) Ọ nwere ike imeziwanye arụmọrụ na arụmọrụ dị elu;
(4) Ezi uche ngwá ọrụ ike na anwụ ngwa ngwa.
1. ofdị nke ịtụgharị ngwá ọrụ
CNC lathe n'ozuzu na-eji ọkọlọtọ mwekota indexable ngwá ọrụ. Agwa na ahụ nke ngwa ọrụ nwere ike ịnwe ụkpụrụ. Agụba ihe na-siplọtọ carbide, ntekwasa ciment carbide na elu na-agba ígwè.
Dị ka ọrụ dị iche iche si dị, enwere ike kewaa ya na onye na-egbutu ihe, onye na-egbutu ihe na mpụga, onye na-egbu ihe n'ime ya, onye na-egbutu ya, onye na-emepụta oghere (gụnyere oghere oghere nke etiti, onye na-agwụ ike, mgbata, wdg).
Mgbe ejiri indexable rụọ ọrụ iji dozie agụba na-abụghị regrinding, ọ na-ebutekarị ngọngọ usoro nke ịghasa, ịpị ịpị efere, ịghasa pin ma ọ bụ nkpirikpi.
2. Họrọ ihe agụba
E nwere ihe abụọ dị iche iche nke ngwaọrụ ọtụtụ ndị na-eji na-atụgharị nnukwu ọsọ nchara na sikwuo carbide.
Ọgba ọsọ dị elu na-abụkarị ihe na-adịghị ọcha, ike ya dị mma karịa carbide simenti, na ịdị ike ya, na-eyi nguzogide na ike ike uhie dị njọ karịa carbide ciment. Okwesighi maka igbutu ihe nwere oke ike na igbusi elu. Ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa kwesiri ka onye meputara ya mee ya tupu o jiri ya, ya na nma ya di nma, nke kwesiri maka ihe di iche iche di iche iche di iche iche.
Cimented carbide inserts nwere magburu onwe ọnwụ arụmọrụ na na ọtụtụ-eji na NC atụgharị. Cimented carbide inserts nwere ọkọlọtọ nkọwapụta usoro, na kpọmkwem oru parameters na ọnwụ arụmọrụ na-nyere site na ngwá ọrụ emeputa.
Dabere na ọkọlọtọ mba ụwa (ISO), e kewara ihe ndị a na-etinye na carbide n'ụzọ atọ: p-steel, m-steel nchara na k-cast iron dabere na ekweghị ekwe na ịgbagọ ike nke simenti carbide. Nọmba nke 01, 05, 10, 20, 30, 40 na 50 ka agbakwunyere mgbe koodu K, P na m maka nkewa. N’ozuzu, ọnụ ọgụgụ ahụ pere mpe dị, nke ka esiri ike, ma ọ bụ obere ike bụ; ọzọ, na ọnụ ọgụgụ ka ibu, bụ ihe siri ike, ma ọ bụ obere ike bụ.
Tụkwasị na nke ahụ, e nwere ihe ndị nwere ngwá ọrụ na ike ma na-eyi nguzogide dị elu karịa carbide ciment, dị ka ceramics, cubic boron nitride na diamond.
Lathe igwe mmezi na ukpụhọde
Mgbe ị na-eji igwe lathe, ị ga-ahụ ntụziaka ndị a:
1) Ihe mmanu mmanu n'ime mmanu mmanu nile kwesiri idobe ya mgbe obula na nlele mmanu; ma ọ bụghị ma ọ bụ na-adịghị arụ ọrụ mmanu ma ọ bụ ekpo oke ọkụ na ọnwụ na ike ga-eme.
2) A ga-ete mmanụ niile mmanụ na mmanụ dị ọcha mgbe niile.
3) Na-enyocha mmanụ mgbe niile site na iko anya na-eme ka mmanu kwesịrị ekwesị nke igbe na igbe nri.
4) Lelee ma dozie esemokwu nke eriri moto mgbe ọ bụla.
5) Tupu ịrụ ọrụ kwa ụbọchị, na-agba ọsọ na-enweghị isi maka otu nkeji, wee rụọ ọrụ n'akụkụ niile nke lathe na-enweghị ibu, jupụta mmanụ n'ime mmanụ bat nke sadulu.
6) Na spindle na-agba ọsọ na nnukwu ọsọ, mgbanwe mberede nke ọsọ id anaghị ekwe.
7) A na-eji ndu ndu maka naanị eri. Ejila ya gbanye ọrụ.
8) Mgbe ị na-etinye ezumike ike ma ọ bụ ezumike ndị na-eso ụzọ, a ga-ete mkpuchi ihu nke izu ike.
1). Spindle ukpụhọde
Oké nwechapụ na spindle amị na-akpata “na-arụ ọrụ gụchara bụghị ezigbo” The spindle swivel ziri ezi na-agụnye radial na-agba ọsọ-na axial ọsọ-apụ. Radial run-out na-ekwe nkwa site okpukpu abụọ n'usoro ala na-agba n'ihu nke spindle na otu n'usoro radial na-atụgharị bọl na-agba na azụ nke spindle mgbe axial ọsọ-esi na-ekwe nkwa site otu ahiri na-atụgharị bọl na-agba na azụ nke spindle. Lelee usoro dị ka ihe 5 na 8 na ule ule. Ọ bụrụ na izi ezi abụghị maka ihe achọrọ, n'ọtụtụ ọnọdụ. Usoro bụ ihe ndị a: mezie akụ na spindle maka iwepụ nnabata na spindle bear.And igbachi otu nut mgbe emezigharị. Ọ bụrụ na ndị radial na-agba ọsọ-adịghị ka ihe a jụrụ ma ịgbanwe n'azụ amị site na ụfọdụ usoro ad kọwara n'elu. Mgbe emezigharị ahụ, na-agba ọsọ spindle na-abaghị uru na nnukwu ọsọ otu awa ma hụ na iburu okpomọkụ ekwesịghị ịfe 70 ℃. Ọ bụrụ na ọ karịrị, mbụ esighi ike mkpọchi kposara na set mkpụrụ, mgbe ahụ mkpụrụ ga-ubé tọhapụrụ, mgbe ukpụhọde, retighten mkpọchi kposara.
2）. Chain wheel ukpụhọde
Mgbanwe nke spindle spal na-achịkwa ndị levers n'ihu isi. Ndị na-achịkwa ihe nchịkwa nwere ike ịgbanwe ntụgharị slide site na usoro igwe eletrik na-enweta ọnọdụ dị iche iche. Ọ bụrụ na ezigbo spindle ọsọ ahụ adịghị nha ya ọsọ ọ bụla edere edere na akara ọsọ nke na-egosi ọkpụkpọ kwesịrị ịme mgbanwe nke igwe ụkwụ igwe. Buru ụzọ mee ka nkedo ahụ dị, mee ka eriri eccentric mee ka agbụ ahụ ruo mgbe a ga-agbanwe akara ntụgharị ọsọ ọsọ ka ọ bụrụ ebe achọrọ, mgbe ahụ, mee ka eriri ahụ sie ike iji chọta osisi ahụ site na bọọlụ nchara.
3). Mgbanwe ndozi
A na-edozi mkpochapu n'etiti slide na ụzọ nduzi na nke dị n'etiti ngwugwu ezumike na ntuziaka site na gibs site na ịghasa n'otu n'otu. N'eziokwu nke azụ azụ nke skịl slide na-eduga site na iyi nke mkpụrụ a na-agbanwe agbanwe, belata ihe nkedo na mkpụrụ ahụ wee jiri akara ahụ wepụta ya ruo mgbe a ga-ewepụ azụ azụ ahụ. Mgbe ahụ ikesiike ịghasa.
4). Mgbanwe Mgbanwe Egwuregwu Motort
A na-agbanye igwe moto isi na ụkwụ lathe. Gbanyụọ ihe mkpuchi dị n'ihu ụkwụ lathe ahụ, enwere ike idozi esemokwu belt site na ịgbanwe echiche nke mpempe akwụkwọ moto site na mkpụrụ. Erughị ala belt nke moto na-adabere n'ebe dị anya n'etiti etiti nke moto pole na nke pulley nke headstock.
Lathe igwe nkịtị kpatara analysis, na usoro ọgwụgwọ
Mba Nkwụsị Ihe kpatara Zọ nhicha
1 Ike na-enweghị ike ịbụ
Enweghi ike imetụ ihe ntụgharị njem Mepee ọnụ ụzọ gbagọrọ agbagọ na ngbanwe ahụ, megharịa ngbanwe ahụ n'èzí n'ụzọ kwesịrị ekwesị, wee degharịa ya
2 Spindle moto enweghị ike na-agba ọsọ A naghị eji ihe eji eme njem Mepee ọnụ ụzọ gbagọrọ agbagọ na ngbanwe ahụ, megharịa ngbanwe ahụ n'èzí n'ụzọ kwesịrị ekwesị, wee degharịa ya
3 Transformchịkwa transformer bụ ọkụ Volta ike na onye ọrụ adịghị dịka voltaji enyere. 1. Dịka ọrụ ahụ si dị, dochie bọlbụ ọkụ na "24v, 40w"
2. Dochie onye na-agbanwe ọkụ n’onwe gị.
4 Aka na headstock ike
Zipu, ya mere ọsọ nwere ike
Agaghị agbanwe agbanwe
1.The positioned ịghasa na-agbanwe
2. Planks ahụ a kwụchiri na-agbanwe.
1. ismkesa a gburugburu efere na a ahụ, na ikesiike positioned ịghasa.
2. Kedo si kposara abụọ na kredit ahụ na plank ahụ.
5 Mgbe spindle na-agba ọsọ na obere ọsọ, ọ nweghị ike ịgbanwe ọsọ Na aku na eccentric aro, nke na-ruo eruo na spindle mmịfe, na-agbanwe. Mepee mkpuchi elu nke headstock na-agbagharị eriri eccentric ụfọdụ otu, wee ziga aka ahụ na oke ọsọ, obere ọsọ ma ọ bụ ọnọdụ efu .Ọ bụrụ na ụyọkọ gia nwere ike itinye aka na ya, mechie akụ ahụ.
6 Onye isi n’isi na-amalite nwayọ The ọdịiche nke esemokwu discs na aro m na headstock bụ nnukwu. Mgbe ị mezigharị esemokwu esemokwu, bulie spindle akara levers iji lee ya ruo mgbe spindle bụ na nkịtị ọnọdụ.
7 Igwe lathe ahụ na-ama jijiji mgbe ọ na-ada ma ọ bụ na-arụ ọrụ arụ ọrụ adịghị mkpa. 1. Ndozi nke spindle na mgbako nzukọ adabaghị.
2. Oke zaa ma ọ bụ nwechapụ bụ nnukwu.
3. Ihe akụrụngwa adịghị mma.
4. Ike nke shank ezughị. Ma ọ bụ cantilever dị ogologo.
5. Nchịkọta dị n'etiti swivel slidel na sadulu adịghị mma.
1. N'ụzọ dabara adaba mezie biarin na spindle na abụọ n'ihu efere
2. Ite ngwá ọrụ dị ka ihe a chọrọ.
3. Họrọ ihe kwesịrị ekwesị nke ihe eji arụ ọrụ dịka ihe eji arụ ọrụ。
4. Na-edozi cantilever ogologo nke shand.
5. Kpechaa slidel swivel.
8 Ihe nkedo nke mpempe ihe na-esite na ihe achọrọ mgbe a na-eji igwe iji gbanwee ihu ala. Ntinye akụrụngwa adịghị Mezie lathe dị ka ọrụ ntuziaka。
9 Igwe lathe enweghị ike iri nri na akpaghị aka. 1. Ejighi lever aka ekpe & aka nri aka nri adighi eji ya eme ihe.
2. Ihe na-efe ọsọ ya na-apụ apụ.
1. Lelee lever. Mgbe ọ dị n'aka nri, igwe nwere ike iri nri na-ejikarị, mgbe ọ dị n'aka ekpe, igwe anaghị enwe ike iri nri.
2. Na aku na siwing etiti na-agbanwe. ka ngwangwa swing na-apụ. Mezie ihe gia ikesiike nut na swing eku.
10 Uwe apron enweghi ike imeghari na oke oso 1. Fiyuo n’ọkụ.
2. Button enweghị ike ịkpọtụrụ.
1. Gbanwee fuuz.
2. Mepee ngwa ngwa na-akpụ akpụ dị elu ma wepụta bọtịnụ ahụ: gbanwee ọla kọpa abụọ na isi kọntaktị. N'otu oge ahụ, pịa isi ihe ndị ahụ, megharịa bọtịnụ ahụ.
11 Zụ na-adị elu mgbe igwe na-agba. Biarin ebibie. 1. Ọ bụrụ na mkpọtụ nke okporo osisi m dị elu mgbe moto ahụ malitere, na-ebibi ihe na-ebu m.
2. Mgbe na-eweli njikwa njikwa na-agba spindle, mkpọtụ dị elu ， mgbe eweli ahụ iji kwụsị spindle, ma ka ndị ọzọ akụ na-agba ọsọ, mkpọtụ bụ ala. Nke a na-egosi na agba na spindle na-ebibi ...
12 A ga-ahụrịrị ihe mgbe ị na-etinye lathe. 1. Igwe ahụ na-agba ọsọ n'otu ụzọ ahụ mgbe ijikọ wires. Agbanwela usoro usoro ihe ọ bụla na igwe ọ bụla.
2. Ga-akwatu akwụkwọ akara mmanụ ma kpochaa ya nke ọma mgbe arụchara igwe.
3. Griiz mmanụ mmanụ na 20 # n'oge oyi ma ọ bụ 30 # n'oge ọkọchị。DO anaghị eji mmanụ mmanu eji mmanụ ụgbọ ala ma ọ bụ mmanụ ụgbọ mmiri dochie ya.